Trano - Forex Lens
Ny masonao ao anaty tsena.
Tadiavo ny TRANO VAROTRAO.
Mijere, mianara, ary tombony miaraka
miaraka amin'ny vondrom-piarahamoninay mpivarotra ao anatin'ny
Mpikambana mpivarotra Pro
Midira amin'ny efitrano fivarotana Forex tsy manam-paharoa
izay mandeha mivantana isan'andro
hanome anao fanadihadiana mivantana ny tsena
& hevitra ara-barotra nandritra ny New York
& sy/na London sessions.
TONGA MPIVAROTRA PRO
HEVITRA VAROTRA ISAN'ANDRO
tombony EO NOHO EO fidirana amin'ny mpandinika teknika za-draharaha ho an'ny Q&A, fanehoan-kevitra momba ny
hevitra ara-barotra, ary manome anao setup ara-barotra mahasoa
amin'ny tsenan'ny Forex, Commodities, Indies & Crypto.
Mahazoa hevitra momba ny varotra!
Mahazoa fidirana amina tranomboky fanabeazana misy horonan-tsary 400+ ora.
Mampianatra paikady ara-barotra matanjaka izahay mba hanomezana ny mpivarotra REAL EDGE amin'ny varotra.
Vidin'ny mpikambana Pro
Te hianatra ny tsiambaratelon'ny vola hendry?
At Forex Lens, tsy mivarotra nofy sy fampanantenana aminao izahay fa mivarotra anao VOKATRA. Forex Lens dia serivisy ara-barotra ara-barotra ara-bola naorin'ny mpivarotra ho an'ny mpivarotra. Ireo mpivarotra toa anay izay mamakafaka tabilao ho an'ny fivelomana dia mila serivisy azo itokisana toa azy Forex Lens mba hanamafisana ny fizotran'ny fanapahan-kevitr'izy ireo. (Inona no hevitra ara-barotra tokony horaisina, ohatrinona ny renivola mety hampidi-doza, ny fomba fitantanana ny varotra, ny fotoana hialana amin'ny varotra, sns.)
Ny tale jeneralin'ny orinasa mahay toa an'i Jeff Bezos dia manantena ny handray fanapahan-kevitra tsara 3 isan'andro. Ahoana àry no ahafahan'ireo mpivarotra andro toa antsika miasa amin'ny ambaratonga ambony? Forex Lens no vahaolana ho an'ny mpivarotra andro marani-tsaina manerana izao tontolo izao. Forex Lens hanampy anao handray fanapahan-kevitra ara-barotra tsara indrindra isan'andro. Izahay no manao ny fototra ho anao ary ny hany ataonao dia ny manatanteraka.
Midira ato aminay Discord Server eto
Vondron'olona mpivarotra tena izy
Ianao no manodidina anao. Midira ao amin'ny vondrom-piarahamonina mpivarotra mavitrika ary mianara amin'ny matihanina za-draharaha. Raiso amin'ny ambaratonga manaraka ny fahaizanao amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo horonan-tsary fanadihadiana ara-teknika mivantana isan'andro.
Live Streams isan'andro & Market Analysis
Lahatsary vaovao isan'andro manome anao famakafakana tsena tena izy amin'ny tsenan'ny Forex, Commodities, Indices ary Crypto. Mangataha famakafakana tabilao momba ny fananana rehetra ary makà hevitra avy amin'ireo matihanina anay.
Hevitra ara-barotra mahasoa & Fikirana
Ny mpandinika ara-teknika anay dia manome hevitra ara-barotra mety ho anao amin'ny fampiasana Smart Money, ary paikady ara-barotra Famatsiana & Fitakiana. Izany dia hanampy anao amin'ny fitongilanana, ny fidirana sy ny fivoahana ary ny fitantanana ny risika.
Mihetsika be dia be ny hetsika vidin'ny zoma tolakandro, ary matetika…
March 4, 2022/by Forex Lens Vaovao
Noresahina tamin'ny fivoriana mivantana androany ny fananganana varotra ho an'ny…
March 3, 2022/by Forex Lens Vaovao
Maka tombony! Fomba tsara hanombohana ny varotra andro hafa.…
March 2, 2022/by Forex Lens Vaovao
Ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanavaozana mivantana ny tsena androany maraina dia nandrakotra ny fomba…
March 1, 2022/by Forex Lens Vaovao
Ny fidirana ara-barotra tsara indrindra dia nodinihina ho an'ny vola lehibe maromaro…
Febroary 28, 2022/by Forex Lens Vaovao
Ny famakafakana Bitcoin dia niova nanomboka omaly. Nitsipaka ny tsena…
Febroary 25, 2022/by Forex Lens Vaovao
Nanafika an'i Okraina i Rosia, ary norakofanay ny fiantraikan'ny ripple tamin'ny…
Febroary 24, 2022/by Forex Lens Vaovao
Nojerena nandritra ny mivantana androany ny fahafaha-manao fananganana varotra…
Febroary 23, 2022/by Forex Lens Vaovao
Ny tombony amin'ny Altcoin dia mitohy amin'ny toerana fohy raha ny BTC sy…
Febroary 22, 2022/by Forex Lens Vaovao
Ny Price Action dia nodinihina nandritra ny marainan'i New York mivantana…
Febroary 21, 2022/by Forex Lens Vaovao
Ny sandan'ny dolara - miresaka momba izany ny rehetra, fa nahoana ...
Febroary 18, 2022/by Forex Lens Vaovao
Ahena ny risika ara-barotra amin'izao fotoana izao, noho ny tsy fahatokisana ny tsena.…
Febroary 17, 2022/by Forex Lens Vaovao
Inona no ao anatin'ny drafitrao
Hampianarinay anao hahavita
Ento any amin'ny ambaratonga manaraka ny varotrao
Ianaro ny fomba hahatongavana ho mpivarotra mahasoa kokoa anio
Raiso amin'ny sehatra vaovao ny fahaizanao varotra. Zahao ny…
Aprily 2, 2021/avy amin'ny forexlens
Raha tsy nanao tantsambo mahay ny ranomasina malama, dia tsena malama ...
Janoary 13, 2021/avy amin'ny forexlens
Raha misarika an'izay itarihana azy ny eritreritra, dia manana…
Novambra 3, 2020/avy amin'ny forexlens
Araka ny nolazain'i Alan Watts lehibe taloha:
Ity no tena tsiambaratelo…
Oktobra 14, 2020/avy amin'ny forexlens
”Tsy afaka manome isa aho Forex Lens avo lenta! Serivisy marevaka, eo foana raha manana fanontaniana ianao ary mahazo torohevitra manam-pahaizana! Fanadihadiana tsara momba ny tsena! Mazava ho azy fa be fahalalana noho ny fanampiana sy torohevitra. Manoro hevitra an'izay maniry hahazo fahalalana bebe kokoa ary ho lasa mpivarotra amin'ny forex. ”(2021)
Jay H.Mpikambana mpivarotra Pro
”Misaotra Institute Trader. Ianao no mpivarotra tsara indrindra hitako, tsy noho ny fahaizanao fotsiny fa noho ny fanoloranao tena ho an'ny mpianatrao. ” (2020)
Shirvan S.Mpikambana mpivarotra Pro
”Nandany dolara an'arivony angamba aho, tamin'ny taon-dasa nahita mpanome tolotra famantarana forex tsara. Mahafinaritra ny manana karazana mpivady maro karazana izay angamba tsy mijery fotoana voatondro aho, ary mahafinaritra isaky ny mandeha, rehefa eo amin'ny varotra mitovy amin'ny iray amin'ireo famantarana ara-barotra aho. Karazana manamarina izay eritreretiko. ”(2017)
Jeff W.Mpikambana mpivarotra Pro
" Tia ny traikefa sy ny fomba mangarahara rehetra. Fifangaroana talenta sy fizarana fahalalana. Voafehy tsara. Toy ny asa. Tohizo hatrany ry zalahy a! ”(2020)
Kaushal G.Mpikambana mpivarotra Pro
” Sarobidy isaky ny denaria. Tena vaovao tamin'ny varotra aho rehefa niditra tao amin'ny efitrano fivarotana. Mampiasa ny paikadin'ny vidin-javatra ho an'ny crypto koa aho ary tena mandaitra tokoa izany. Tena manoro hevitra aho Forex Lens ho an'izay vao manomboka mivarotra. Toa manana zavatra mandroso be dia be koa izy ireo izao ary maro ny mpivarotra mahay mifandramatra izay tena tsara. Nomariko ho azy ireo ny fahombiazako! ”(2020)
Doris B.Mpikambana mpivarotra Pro
Ianaro ny fomba fifanakalozana Forex avy amin'ny A ka hatramin'ny Z
Fanabeazana momba ny varotra Forex
Ahoana ny fampiasana famantarana famantarana Forex ny tena lalana
March 18, 2020/nataon'i Op Ed
Febroary 21, 2020/avy amin'ny forexlens
Mitadiava mpivarotra mety amin'ny fanatanterahana arabe
Febroary 14, 2020/avy amin'ny forexlens
Nahazo mpampianatra mpitaiza
Febroary 10, 2020/avy amin'ny forexlens
Ny fananganana fototra ho an'ny varotra andro
Febroary 6, 2020/avy amin'ny forexlens
Ahoana no hidiran'ny Varotra andro
Febroary 3, 2020/nataon'i Op Ed
Page 1 ny 212
Mpanadihady teknika ao amin'ny paosinao
Manararaotra ny zavatra niainan'ireo mpandinika teknika anay ary manara-maso haingana ny fianaranao. Asehonay aminao ny fomba ahafahanao mamorona loharanom-bola tsy miova amin'ny alàlan'ny fifanakalozana Forex miaraka amin'ny paikadim-bola sy fitantanana risika.
Mitsitsia fotoana amin'ny tabilao!
Mitsitsia ora maro hamakafaka ny tabilao mitady haingo tsara. Izahay dia mahita hevitra ara-barotra mahasoa ho anao hamakafaka. Avereno ny fotoananao. Ny fahalalahana ara-bola dia lehibe, fa ny fahalalahana ara-potoana no zava-drehetra.
Hevitra varotra bebe kokoa - ary ho an'ny kely kokoa!
Mahazo fidirana amin'ny tsy 1 fotsiny, fa mpandinika ara-teknika marobe miaraka amin'ny paikady ara-barotra samihafa (toy ny Smart Money) hanampy anao amin'ny varotrao - ary amin'ny kely kokoa!
Miaraha mijery, mianara sy mahazo tombony
Fanapahana ny famakafakana ny tsena feno, hevitra ara-barotra, miaraka amina fivoriana Q&A - isan'andro! Mianara mamolavola sisiny tena izy amin'ny fifanakalozana varotra amin'ny metodolojia ampianarintsika. Mpivarotra mahay mifehy sy mahay mandanjalanja kokoa ianao rehefa lasa mpivarotra Pro!
Mianara amin'ny tontolo tsy misy risika
Atombohy ny fampiroboroboana ny demo amin'ny tontolo varotra tsy misy risika raha mianatra ianao. Azonao atao ny manatsara ny fahaizanao varotra nefa tsy manahy ianao sao very ny tena vola. Ny fifanakalozana no talenta afaka mandoa anao mandritra ny androm-piainana.
Ekipa tohanan'ny mpanjifa tsara indrindra
Miresaka amin'ny ekipanay na oviana na oviana fifandirana na mandefasa mailaka aminay miaraka amin'ny fanontanianao, hevitrao ary olana ao [email voaaro]. Eto foana izahay hanampy amin'ny varotrao.
Mahazoa famintinana isan'andro momba izay hitantsika eo amin'ny tsena Forex
Price Action Analysis + EURUSD dia Super Bearish
Fanamboarana varotra + tombony ara-barotra ara-pahasalamana
Mandray tombony + Tanjona lehibe maromaro tratra
Live Market Update + NZDUSD sy AUDUSD Sell Scenario
Fidirana ara-barotra tsara indrindra + Paikady ara-barotra fohy BTC & ETH
Bitcoin Analysis Update + EURGBP amin'ny tombony
Nanafika an'i Okraina i Rosia + Nahatratra ny tanjonay ambony ny USOIL
Tombontsoa Altcoin + fidirana tsara amin'ny AUDUSD
Price Action + USOIL Setups zaraina
Ny sandan'ny dolara: ny fomba hividianana aloha sy hitazonana ny tombony azonao
Mampihena ny risika ara-barotra + paikadin'ny BTC sy ETH
Page 1 ny 52123>»
Page 1 ny 208123>»